Kuchengetedza Kwaungaita Basa Rako Garden Tools mu Rakaumbwa Great - China Richina
Kuchengetedza Kwaungaita Basa Rako Garden Tools mu Rakaumbwa Great
Vanoda chivanze? With mubindu mukurumbira saka mazuva ano, havasi kuseri kwedzimba zhinji kuti havana kanenge imwe nama, hari, kana mudziyo pamwe chinhu kukura mariri. Asi Ungangove, uri kubhadhara yakawanda kuteerera miti yenyu uye kwete zvakawanda zvokushandisa ukashandisa kukura navo. Trowels, mapadza, nefoshoro, uye nefoshoro tora yakawanda yokushungurudzwa munguva mumwaka wokukura uye kana ukawana zvishoma nguva kuvada, vachagara kushanda zviri nani uye kwenguva yakareba nokuti iwe.
Tisati tataura pamusoro mubindu giya uchitova, yeuka apo kutenga itsva Gardening Tools kuti kupedza zvakawanda pamusoro yepamusoro Ezvemutauro achaponesa iwe kurwadziwa uye mari pakupedzisira. Bhadharai zvishoma zvokuwedzera kuti chombo kuti ichagara, pane zvakachipa zvishandiso ichasakara uye aifanira kutsiviwa kakawanda. Zvino kuzvishandisa zvakakodzera! Sezvo shoko unoenda, kana zvose zvaunazvo nenyundo, zvose anotarira akafanana chipikiri-asi kushandisa mudziyo kuti chinhu hazvina kuita chinhu anokurumidza nzira kukuvadza kana kuiputsa (uye kunyange kukuvara pachako pakuitika) . A-refu nemibato nefoshoro haisi crowbar, musana nesanhu haisi nechireyi sando, uye ruoko pruner hakuna kugadzirirwa akaona kuburikidza rimwe padiki bazi. Kana uchida kuita chinhu kwenyu Zvarevashe kuitika zvekushandisa haisi kusvika, funga kutenga chinhu yakakodzera, nokukwereta neshamwari, kana kuti kurenda imwe maawa mashoma (a mhinduro yakanaka dzakagadzirirwa Ezvemutauro hamungambovi hedu kakawanda).
Wangova kuva zvakanaka Gardening Tools, heyi 6 nyore nzira kuramba kwavari, kutanga okuchengetera!
A rakadeurwa ndiyo shamwari chombo nokuti pashure kushandisa, nhamba imwe muvengi zvekushandisa ndiyo mamiriro okunze. Anoedza sezvo zvingava kusiya zvokushandisa zvako apo uchada navo mangwana (kana vhiki rinotevera), don`t kuzviita! Zviunganidzirei zvokushandisa zvako zvose ari rakadeurwa, garaji, kana kunyange weatherproof chishandiso chekuchengeta chikwata kubva mumunda (a mailbox kumaruwa anoita kukuru weatherproof Zvarevashe noruoko maturusi), uye pasakurumidza kazhinji refu kupfuura zvishandiso kupedza nguva ari zuva, mvura, uye mhepo (kana kuti zvakavigwa uswa hurefu uye tobva anodarika).
Outdoor okuchengetera iri kupfuura kuti emapuranga Pazvibato, izvo zvinogona roughen, mitswi, paradzanisa, yakarukwa, uye kuora pamusoro nguva. Akakodzera chishandiso-okuchengetera nzvimbo inodzivirira zvokushandisa zvako kubva ekunze asi anobvumira kuti mhepo kuparadzirwa, saka maturusi anokwanisa aiyanika uye nengura nokuora kashoma kuitika.
Ivhu akabata unyoro uye anokurudzira nengura, saka kuisa maturusi dzako kure yakachena kuvabatsira kuti kwenguva yakareba. Ndizvo uyewo yakanaka nzira kudzivirira nhonga sora nemidzi uye mbeu kana chirwere ivhu nezvipembenene rurege hwakatamiswa kubva panzvimbo nenzvimbo. Usati vakaisa zvokushandisa zvako, kusuka chero ivhu, kana vadzime rugure aine putty banga (chengeta mumwe nomumwe wenyu mudziyo okuchengetera nzvimbo). Shandisa nomucheka (ane zvishoma turpentine, kana zvakakodzera) kubvisa chirimwa muto uye Inogadzirwa nemasiridzi anobuda mumiti, kucheka maturusi. Aome kuti kucheneswa zvishandiso, kunyanya chero simbi uye emapuranga zvikamu, ane absorbent dhende.
Kudzivirira kupararira Disease
Kana wanga kushanda pachena hosha chirimwa zvinhu, soka yako vakachenesa zvekushandisa mune mhinduro pahafu vachidzipukuta doro uye hafu mvura kwemaminitsi mashanu yekuuraya chero utachiona asati kupwa zvokushandisa uye kuchengeta navo.
Most cook vakanaka vanoziva kukosha banga rakapinza, asi sei Chikwata zhinji vanoziva kuti unopinza zvishandiso kuti bindu mabasa mhanyisa, nyore, uye mune zvimwe zviitiko kunyange nani zvinomera? Kuchengeta pamucheto zvakanaka nebadza kana ruoko pruner zviri nyore uye achaponesa iwe nguva pakupedzisira. Usamirira kusvikira yenyu chokushandisa yakagomara: Funga arodzwe sezvo zuva nezuva flossing kuti midziyo yenyu!
Tanga nokuongorora kumucheto chipande. zvishandiso Vakawanda sandara rumwe rutivi uye angled (beveled) pamusoro neizvi rutivi; zvimwe zvokushandisa zviri angled kumativi ose. Uyewo kuchengeta pakona ari "bevel." Zvinobvumirwa unopinza uye dzakaonda akafanana banga kana kunongova chaizvo pamucheto Vakarodza panguva yakawanda sevakagurika pakona? Chinangwa chako ndechokuti tirambe yepakutanga configuration.
Baby The Metal Parts
simbi Ezvemutauro Most vanobatsirwa nhete unhani mafuta kudzivirira ngura, kana vari akagadzirwa Stainless simbi, izvo asingambovi payo. Ramba mugaba nemafuta linseed kwenyu chishandiso nokuteura pamwe nyoro dhende, uye mupe yako vakachenesa Ezvemutauro kukurumidza kamwe-mberi achivaisa kure. Ndapota don`t kushandiswa injini mafuta pamusoro midziyo yenyu! Nezvakawanda yokumunda mabhuku zvichiri yekupinda nayo, asi imi here unoda kuisa mafuta injini kupinda zvakanaka mumunda ivhu renyu? Ini zvirokwazvo don`t.
Kana ukaona chinhu ngura, vanoshandisa waya mumakwenzi kana Emery jira (vorudzii sezvinoita chipikiri faira glued kuti jira pane makadhibhokisi uye anoshandiswa metalworkers) kuti arubvise. Unogonawo varikwizire kurukukura nejecha jikichira. Ramba yakasimba nebhaketi rakazara jecha yakakanyiwa nemafuta ako rakadeurwa, uye chete vanoshamba pasi vakachenesa chishandiso kupinda jecha kakati. Kazhinji Ndizvo zvose Zvinoda vose vokuPoland uye mafuta zvokushandisa zvako panguva imwe chete.
Condition The Wooden Pazvibato
Nguva nenguva kushandisa nhete unhani mafuta linseed kuti aiyanika, unpainted yematanda pazvibato uye Buff kure chero zvakawandisa chete yakachena dhende mangwana. A zvakaipa weathered mubato achaita soka kumusoro vakasvimha mafuta, saka wedzera nhete unhani zuva kusvikira pane mafuta shoma vakasiiwa panyika raitevera zuva. Kana usingakwanisi kuwana mafuta linseed pane yomunzvimbo Hardware chitoro, musoro dzinongoitika zvokudya munharaunda chitoro yenyu. Flaxseed mafuta kuti kubika pamwe zvimwechete se linseed oil- "him" se mu "mucheka," ari faibha yaigadzirwa neshinda. Izvi zvakare yakanaka nzira kushandisa chero mafuta yekare flaxseed mu kicheni venyu akava kure kuravira.